Home Wararka Farmajow Intaad Fashay oo Foolxumo ah Fiiri oo is Casil.
“Haddaad been ku timid shalay, buro fool ku taalliyo, bar-madow in aad tahay, maanta waan ku barannoo, berri nama dageyside, Fahad boqor hakaa dhigo”
Maantana waxaa xanuunkii dalka ay badeen Farmajo iyo Fahad ku darsamay geerida Gabar muddo ku maqneyd gacanta dowladda NN oo aysan waxba ka dhihin maanta ka hor. Runtii mr waliba waa xanuunba kii kale ka daran , oo maalin walba waxay dad aad u badan badaan Fahad iyo Farmajo dhibaato xanuun badan oo sannado la xusuusan doono.
Ikran Tahliil waxaa xoog ku haystay NISA oo uu agaasime u yahay Fahad Yasiin, Farmajo oo la ogaa waxa dhacay iyo sida ay wax u dhaceen marnaba kama hadal oo wax xanuun ah kuma hayn. Bal qiyaasa haddii maanta ay ahaan lahayd gabar ay dhaleen isaga iyo Marwo Saynab ma sidaan ayuu uga aamusi lahaa? Miyuusan beer wax dhalay ahayn oo jiir dubaaxdaa lahayn, dareen islaanimo, mid aabbenimo, mid madaxweynenimo lahayn.
Islaan hooyo ah ayaa laga hayaa nin intaan aragnay ay walaashiis la dhalatay ka sheegtay ayaan madaxweyne ka dhiganay oo aan haddana ka sugeynaa inuu ubad noo ilaaliyo, gabar waa qofka ugu hiilka badan walaalkeed maalinta ay heerkaas gaarto ma aha wax la dhalayasan karo ee intuusan Gabdho badan naga halligin villada ha laga saaro.
Runtii Farmajo iyo Fahad dalkaan waa kufsadeen waxayna ka sameeyeen wax shakhsi Somalinimo ku jirto oo damiir leh uusan u dulqaadan Karin. Ikraan Tahliil waa la ogyahay ee meeqa Ikran ayaa maqan ama la nolol duugay? Imisa reer ayey dowladdaan dhaawacyo aan hareyn u geysatay oo murugo iyo qalbi xumo maanta ku nool.
Kooxdaan waa koox burcad ah, mana jirto cid amaan Muqdisho waxaana earayo geesinimo leh qortay Xildhabaan runtii geyrkeed wax badan dheer oo garatay waajibaadka xildhibannimo waa Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi.
Waxaa yaab leh aaway raggii xildhibaanada ahaa? Ma cabsibaa misa waa ka raalli ahaansho waxa burcad dowladeeddaan Fahad iyo Farmajo ay dalka ku falayaan?.
Shacbiga qaar caruurtoodii ayaa sidaas loo afduubay oo dalal shisheeye laga iibsaday sida Itoobiya. Kuwa sidaas ayaa inta loo awood sheegtay loo afduubtay kadibana markii laga muraad yeeshay birka la raacshay. Muwadin Qalbidhagax cidi kama qarsoona waxa lagu sameeyey oo isagoo nool loo diyaariyey inay jeelka ku dilaan.
Xataa waxaa adag inaan qoraalkaan sii wadi karo waayo ma naqaan waxa ay dadka Somaliyeed mudan yihiin in loo sheego waayo adanaha waxaa hogaamiya sharafta iyo dadnimada. Muxaafid iyo mucaaridka ka aamusan waxyaabaha dhacaya waa dadnimo xumo weyn oo liidnaan ah.
Farmajo iyo Fahad caawa waxay ahayd ina Xamar ka cararaan ama ay dhuumasho ku joogaan. Waxaa la fahmi la’yahay aawaay qaaqlayaashii mar walba la yeeri jiray wax laga xishoodo maxay maanta u aamusan yihiin. Aaway Jeesow? Aaway Khadiija Ilkacas? Aaway Cabdhullahi Sheekh Xasan? Aaway Cali Geedi ? Aaway Salaad Cali Jeelle? Aaway Awliyo misa dhamaantood waxay cunaan ayey raadinayeen waxaa loo tuuray Sandareerto yar oo ay ku aamusan yihiin?
Aaway gabadhihii aqoonta lahaa ee maxay uga hadli waayeen? Iyaga yaa u ballanqaaday inay nabadgalayaan haddii sidaan ay Ikraan ku baxdo. Laga yaabe in dowladdu ay hayso caddeymo ay cuskaneyso sida aan ka maqallay dad NISA iyo Villada ku dhow ha soo bandhigaan oo maxkamad ha tagaan, laakiin qof dhallinyar ooh anti qaran ah in sidaas loo waayo waa khald ay tahay inaan la aqbalin
Dhinaca kale haddii Ikraan Tahliil ay weysay dowlad iyo xildhibaanno ka naxa xataa ma weysay beelweynta ay ka dhalatay oo Xamar iyo Koofurta degto hiilkeeda oo u dooda xaqeeda? Somalidu haddii dowlad la waayo waa qabiillo, haddii Ikran Xamar sidaas lagu yeelay ? yaa ku nabadgalaya Xamar? Waxayna noo abuuri kartaa colaad qaabiil oo aan hadda muuqan.
Farmajo Is Casil oo damiir yar iska eeg. Waa dhab inaad adkaatay kooxaha hunguridoonka ah iyo kuwa beenta sheegaya ee leh waxaan nahay musharixiin maadaama ay kugu daawanayaan dalka inaad burburisid, waa yaabe berri yey rabaan inay xukumaan sow maaha kuwii kuu ogolaaday inaaad heerkaan na gaarsiiso oo mid kasta uu leeyahay haddaan aniga la igu badalayn ha joogo.